Muscular Dystrophy: Wiricheya Zvinodiwa - Hutano Mamiriro
Dzimwe nguva Muscular Dystrophy inotsanangurwa nekuparara kwenyama yemhasuru; chirwere chemajini chinobata vanhu vasina rusaruro.
Kune mhando dzakasiyana dzeMuscular dystrophy senge myotonic, limb-bhandi, kuberekwa, distal, becker, duchenne, oculopharyngeal, nevamwe. Dzese dzinogarwa nhaka kuburikidza nevabereki.
Kuti uve wakazvimiririra uchitambura neMD, ungangoda a wiricheya kutenderera. A wiricheya yemawoko nemubati pamwe naye inogona kunge iri mhando yakanakisa ye wiricheya kunze uko kwechiitiko ichi, chero vanhu vanotambura neMD yakaoma, vanogona zvakare kutarisa muchigaro chakatsenhama kana a tilting wiricheya kune zvimwe zvakapfuura maficha.
Muscular Dystrophy Sangano: MDA
Tsandanyama dystrophy - Wikipedia, iyo yemahara encyclopedia